ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Thursday, July 23, 2009 / အကြောင်းအရာကတော့ ဟာသ / Comments: (5)
ဖြေ။ ၂၀၁၀ မတိုင်ခင်ကတည်းက စစ်အစိုးရခိုးလို့ ကုန်သွားပြီ။
မေး။ သဘာဝနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ အချစ် ဘယ်နှစ်မျိုးရှိပါသလဲ?
ဖြေ။ သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ယောက်ျားက ယောက်ျားကို ချစ်တာ။ မိန်းမက မိန်းမကိုချစ်တာ။ မြန်မာပြည်သူက မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ချစ်တာ။
မေး။ အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ ဘာလို့ တပ်မတော် တစ်ခုတည်း ထားရှိမှာဖြစ်ပါသလဲ?
ဖြေ။ တစ်ခုထက်ပိုများရင် မြန်မာပြည်သူတွေက ကျွေးမထားနိုင်လို့ပါ။
ဆိုဗိယက်ခေတ်မှ ဟာသများကို ကိုးကားပါသည်။
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား / အကြောင်းအရာကတော့ အတွေးနဲ့အရေး / Comments: (6)
အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကြောင့် ဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်းကို တစ်နှစ်လောက် ရပ်နားထားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ဒီရွှေဘိုသားဘလော့ဂ်လေးကို ပြန်ပြီး အသက်သွင်းချင်တဲ့ စိတ်ကလေးပေါ်လာတာနဲ့ ရီနိုဗေးရှင်းပြန်လုပ်ပြီး အသစ်တဖန် ပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ရန်သူ၊ မိတ်ဆွေမရွေး အားလုံးကို ရွှေဘိုသားဘလော့ဂ် က ကြိုဆိုပါတယ်။ မွန်းကြပ်နေတဲ့စိတ်တွေအတွက် ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ ရေးသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်ဖြစ်မြောက်အောင် တိုက်ရိုက်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်သောနည်းအားဖြင့် သော်လည်းကောင်း အားပေးကူညီကြသူများအားလုံးကို ရွှေဘိုသားဘလော့ဂ်မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း..